Apex Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
APEX Legend mbanye anataghị ikike
Akụkọ Apex bụ egwuregwu dị egwu nke na-ewebata ụdị egwuregwu ọhụụ maka ndị na-agba égbè. Ejikọtara ya na Apex Legends Hack, ọ dịghị onye nọ na mbara ala a nke nwere ike igbochi gị!
Boughtzụtala Apex Hack? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rịba ama: Tupu ị zụta haps Apex anyị, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were obere awa. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi Akara Hacks
Atom mbanye anataghị ikike
ịzụta Akara Hacks na 4 nzọụkwụ
Buru egwuregwu kwesịrị ekwesị ị na-achọ ịbanye na hacks, anyị nwere nnukwu nhọrọ ịhọrọ site na!
Enwere ọtụtụ hacks iji tụlee, yabụ ị ga-ahọrọ nke kwesịrị gị mkpa.
A na-edozi ụgwọ anyị niile naanị na nchekwa, na-echekwa ndị ọrụ anyị
Ugbua na ịzụrụ igodo ngwaahịa, ịnwere ike iji ya budata Apex Legends Hacks.
Gini mere eji eji Gamepron Apex Legends Hacks?
Oge Apex Legends Oge 10 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na ndị egwuregwu nwere obi ụtọ itinye aka na Legend ọhụrụ, onye ọhụụ. Emebere onye na -ahụ ụzọ gburugburu ịnweta ozi gbasara onye iro dịka o kwere mee, dịka aha ya ga -egosi. A kwadebere ya na ihe mmetụta obi, drones, na ụzọ iji hụ nzọ ụkwụ onye iro.
Apex Legends emelitere ọtụtụ oge n'oge ndụ ya niile na emezigharị ụfọdụ map ọtụtụ oge, Worlds Edge bụkwa otu n'ime ha. Maapụ ahụ ruru maka mmelite nke atọ ya na mmelite na-esote ya na Apex Legends, na ihe ịrịba ama niile na-egosi na ọ ga-emebi ma ọ bụ mebie ya na mmemme na-abịanụ.
Legend Apex nwere agwa agbajiri agba agba kemgbe May, yana ngere Wattson anaghị eme ihe ha kwesiri ime. Site na mmelite 1.69, ndị isi Wattson nwere ike rejoiceụrị ọ inụ na ịnụ na ngere ha ga-enwe ike ibelata ngwa ngwa karịa nke ọma, na-eme Wattsone dị egwu nke na-akwado njikwa igwe mmadụ.
Akụkọ Apex bụ akụkọ egwuregwu Royale ọhụrụ na-eme ka ị nwee ike iso ọtụtụ ndị enyi ndị ọzọ dakọtara ha ma buru ha gaa agha. Ga-amụta ngwa ngwa na ụfọdụ mkpụrụedemede dị ike karịa ndị ọzọ, nke a pụtara na ị ga-ata ahụhụ iji ha na - isonye na na ịghọ aghụghọ ule ma ọ bụ nanị ịnwụ mgbe nile. Ndị aghụghọ na-aga abịa na ọtụtụ dị iche iche, ọbụna ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ dị n'ime anyị Apex Akụkọ Ifo mbanye anataghị ikike nwere ike ịbụ iji mee ka ị banye na Ọchịchịrị Akụ! Never nwetụbeghị ụdị uru a mgbe ị na-egwu egwuregwu vidio, nke ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Ọ bụghị naanị na anyị na-enye ndị ahịa anyị akụrụngwa ọkpụkpụ nke ị ga-ahụ na ịntanetị niile, anyị na-enye naanị Apex Legends Hacks nke ga-eme ka ị bụrụ igwe na-enweghị mmeri. Egwuregwu ọ bụla ga - eso gị gwụchaa n’elu maka na e mere Egwuregwu Legend Apex iji chịkwaa nsonaazụ egwuregwu niile. Site na mmasi Apex Legends Aimbot, ESP, NoRecoil, na ọtụtụ njirimara ndị ọzọ, enweghị ịkọ etu ịga nke ọma ị ga-enwe mgbe ị na-eji aghụghọ anyị.
Y’oburu n’iburu ndi Apex Legends n’oge gara aga ma nwekwaa ezigbo nkpa karie, enwere ike inwe ezigbo ihe kpatara ya. Ọtụtụ ndị egwuregwu enweela ike imeziwanye nkà ha afọ gara aga ma ọ bụ karịa, na n'ihi nke a, enwere ọtụtụ ndị egwuregwu ndị ọzọ dị elu na egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eburu ya maka oge mbụ nke a nwere ike ịbụ ihe na-akụda mmụọ n'ụzọ dị ịtụnanya, ebe ụfọdụ ndị egwuregwu anaghị echegbu onwe ha inye egwuregwu ahụ ohere nke abụọ mgbe ha gbachara mmeri mbụ ha nwere. O nweghi ihe nkpuchi n’agba ikpeazụ mgbe arụ ọrụ Apex Legends m rụọ ọrụ n’ihi na ngwa ọrụ anyị enweghị isi.
Anyị gbalịrị ịmezi usoro ntinye iji hụ na ọbụlagodi ndị ọrụ novice nwere ike ịnweta Apex Legends Hack, anyị chere na anyị nwere ihe ịga nke ọma na nke ahụ. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere komputa gi site na nje virus zoro ezo ma ọ bụ ọbụna machibido akaụntụ gị n'ihi na Gamepron na-enye 100% aghụghọ na nchekwa nke ndị ọrụ niile. Ihe obula ichoro ka ichoro iji merie otutu egwuregwu na Apex Legends, di na imara na Apex Legends Hack gunyere ihe ichoro.
Apex Wall mbanye anataghị ikike (ESP)
Ozi apex Player ESP (Aha, Ogwe ahụike, ebe dị anya)
Apex Nkebi ESP na nzacha
Apex ịdọ aka ná ntị ndị iro
Apex super jump mode (ọ nweghị ọdịda mmebi mgbe arụ ọrụ).
Apex ọkpụkpụ & nzube isi configurable.
Onye na -akwụ ụgwọ Apex Recoil
Ezigbo Akara Hack atụmatụ
Jiri anyi Apex Legends Player ESP ka ịdebe ebe ndi iro nọ, yana kpọọ egwu ndị otu gị!
Chọpụta ndị egwuregwu bụ ikuku mgbe ị na-eji Apex Legends ESP, ebe anyị na-enye gị ụdị aha, Ogwe ahụike, na oke ha.
Chọta ihe kachasị mma na-enweghị mgba! Iji anyị Nkebi ESP na nzacha na-enye gị ohere ịhụ egbe kacha mma na ụlọ ọ bụla.
Nwere ike ịchọta Aim Legends Aimbot ebe a na Gamepron, ọ bụkwa nhọrọ doro anya maka ndị na-achọ imeziwanye na ha ziri ezi.
Apex Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti etiti)
Sochie mgbọ gị dịka onye dinta ọ bụla ga - eme site na iji atụmatụ Apex Legends Bullet Track. Zuru okè maka ma n'etiti na obere anya!
Ndị iro agaghị enweta ọdịda gị ọzọ, ebe anyị na-enye nchebe n'ụdị ndọtị ịdọ aka ná ntị ndị iro (mgbe ọ bụla ha dị nso ma ọ bụ lekwasị gị anya).
Apex super jump mode (ọ nweghị ọdịda mmebi mgbe arụ ọrụ)
Da site na ikekwe ọnwụ dị elu bụ ikuku mgbe Apex Legends Hack na arụ ọrụ, dịka Super Jump Mode ga-eme ka ị nwee ọganiihu.
Apex ọkpụkpụ & nzube isi configurable
Anyị nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru gụnyere n'ime Apex Legends Hack, gụnyere Bone Prioritization na ọtụtụ ntọala ndị ọzọ nwere ike ịhazi.
Apex aimbot anya ndenye ego
Anyị Apex Legends Aimbot gụnyere nyocha ọhụụ, nke ga - enyere gị aka ikwenye na egbu egbu ma chọpụta ebe ndị iro na-ezo.
Ihe ngbaghara nwere ike igbu gị n'oge ọgụ egbe, ebe ọ nwere ike imetụta izi ezi gị n'ụzọ na-ezighi ezi. Wepu ya kpam kpam na Apex Legends na-akwụghachi ụgwọ!
Bụrụ onye ọkpụkpọ egwuregwu kachasị mma na Apex na mbara ala
Are na-anwa ịghọ onye egwu egwu Apex Legends nke ụwa anyị hụtụrụla? Ezie na enwere ụfọdụ ndị nwere isi isi, iji anyị Apex Legends Hack bụ ụzọ kachasị mfe iji gakwuru usoro a. Ọbụghị naanị na ị ga-enwe ọganiihu karịa ma merie ihe ọ bụla egwuregwu, mana ị ga-ekpori ndụ mgbe ị na-eme ya! Anyị niile chọrọ ịbụ ndị mmeri na ndụ, yana ngwaọrụ dị na Gamepron na-enyere gị aka iru nke ahụ.
Apex Legends Hacks na Ndị aghụghọ
Apex Legends ESP na Wall Hack
Ọzọ Apex Legends Hacks na Ndị aghụghọ
Anyị Apex Legends Hacks bụ ndị ama ama maka ezigbo ihe kpatara ya, ọ bụkwa nke ndị na-eweta mbanye anataghị ikike ndị ọzọ kpọrọ anyị asị. Anyi anaghi anwaputa ngwa ngwa ngwa ngwa dika nke a bu n’ihi na nke ahu gha emebi emebi ihe anyi nwere inye. Mgbe ị gbadoro anya na-eme ọtụtụ narị ngwa ọrụ dị iche iche ma na-anwa ịmepụta ihe egwu maka egwuregwu ọ bụla n'ebe ahụ, ogo ahụ ga-agbagha. Anyị Apex Legends Hack bụ nke anyị na-arụ ọrụ opekata mpe otu afọ, anyị agbaghị ihe ọ bụla ma ọ bụ naanị mgbe anyị wepụtara ngwaọrụ ka mma.
Ọ bụ ya mere anyị ji anọgide na-abụ ndị kachasị ewu ewu na Apex Legends Hacks online n'ihi na anyị maara ihe gamer chọrọ. Anyi ghotara otu o si ewusi iwe na njedebe nke egwuru egwu Apex Legends, yabụ anyi kpebiri weputa Apex Legends Hack nke g’enyere ndi oru anyi aka izere nsogbu ahu.
Ebumnuche ebumnuche gị ga-ekpebi ihe ga-esi na egwuregwu gị pụta, n'agbanyeghị ma enwetara atụmatụ niile enyere ma ọ bụ na ị meghị. Anyị Apex Legends Aimbot nwere ụfọdụ atụmatụ bara uru gburugburu, dị ka Auto-Aim / Fire na ebumnuche dị mma iji mee ka ndị na-ekiri gị pụọ n'azụ gị. Chọghị ịme ohere ọ bụla n'egwuregwu ị ga-alụ ọgụ megide ọtụtụ ndị otu ndị ọzọ, yana eziokwu ahụ bụ na egwuregwu ọ bụla nwere ike ịbụ ogologo oge na-agbakwunye na mkpa mmeri.
You'll ga-akụpụ isi ndị mmadụ site na ebe dị anya mgbe Apex Legends Aimbot ga-enyere gị aka, ị chọghịkwa inwe egbe mgbaasị iji mee nke a. Anyị na-eche mgbe niile na ndị egwuregwu enweela mgbanwe dị ukwuu na Legend Apex, mana iji Apex Legends Aimbot ga-ewetara gị ntụgharị gị n'ogo ọhụụ. Were ya na ndị ọkachamara, anyị maara ihe na - arụ ọrụ - nke a na Apex Legends Aimbot na - arụ ọrụ!
Anyị Apex Legends Wall Hack na ESP dị ka nwatakịrị, n'echiche na anyị na-eto eto ma na-azụlite Wall Hack ruo oge ụfọdụ. Agbanyeghị na ESP na Wall Hack ị batara ga - eme otu ihe ahụ, ntụgharị anyị dị iche - anyị ga - ahapụ gị ka ị hụ ụdị nhọrọ ESP dị iche iche, ọtụtụ n’ime ha ga - enyere gị aka ịmata oke egwu gị onye mmegide bụ. Ma ị chọrọ ịhụ ihe egbe mmadụ na-eji ma ọ bụ ahụike ole ha hapụrụ, ị nwere ike iji Ape Legends ESP na Wall Hack chọpụta ihe ọmụma dị oke mkpa site na ntọala siri ike na nke na-apụ apụ.
Anyị agaghị emehie ihe na ọrụ a, ebe ịpụpụ nwere ike ịpụta mmachibido iwu maka ndị ọrụ anyị. Anyị niile hacks na-kpam kpam ahụghị na-agaghị etinye gị n'ihe ize ndụ, otú doro anya ma ọ bụ Apex Akụkọ Ifo ESP na Wall Hack bụ otu.
Ndị iro gị ga-abụ ndị aghụghọ mgbe ụfọdụ, na-apụ na ị ga-esite n'aka gị site na ịchụpụ na ịnwụ ọnwụ site na sentimita ole na ole. Anyị na-eji Apex Legends Hacks nwee mmetụta dị elu karịa ka ị na-egwu egwu, mana gịnị na-eme mgbe mmadụ na-amị amị zuru ezu iji gbahapụ gị? Nwere ike iji akara Akara ụkwụ iji mata ebe onye iro na-aga n'ihu, ebe akara ukwu ga-eso ha n’azụ ma duru gị gaa ebe ha nọ. Nke a bara ezigbo uru maka mgbe ị na - achụ onye iro, ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọpụta ebe mmadụ ole na ole gara aga na - ezo na mpaghara ikpeazụ. Bụrụ onye isi na-achọpụta ma chọpụta ndị na-emegide gị na enweghị nsogbu, n'agbanyeghị ebe ha nọ.
Njirimara di elu na uzo di nma bara uru nke aka ha. Njirimara Mmebi Dị Elu ga-enye gị ohere ịpị ọkpọ ka ibu karịa ndị iro gị niile, na njirimara nke ga-eme ka ị mata etu ndị iro gị si dị anya (na egwu nwere ike).
Gamepron na-mgbe niile ga-abụ ihe ndị kasị vasatail mbanye anataghị ikike Mmepụta gburugburu, na ọtụtụ ihe anyị ji n'aka. Ọ bụ ezie na ndị mmepe ndị ọzọ nọ na-atụgharị isi mkpịsị aka ha ma ọ bụ naanị na ha na-arụ ọrụ ndị dị ala, anyị na-anwa imeziwanye ngwa ọrụ ewepụtara ma mezue ndị anyị ahapụbeghị. Anyị Apex Legends mbanye anataghị ikike abịa onwem na amasị nke a na-ewepu atụmatụ, nakwa dị ka ọtụtụ ndị ọzọ bara uru atụmatụ ị na-adịghị na-ahụ na a omenala eji Aghọ Aghụghọ Ule. Anyị na-agbanwe etu ị si abịaru hacking na Apex Legends ka mma, o dokwara anya na ndị na-egwu egwuregwu n'ofe ụwa hụrụ ihe anyị na-achọ imezu anya.
N'agbanyeghị ihe ị nwere ike iche na ịchọrọ maka gbasara Apex
Legends Hacks, Gamepron ga-ejere gị ihe kachasị mma anyị nwere. Kwesighi ịkọ amụma nke abụọ Apex Legend hacks ọ bụla, ebe ọ bụ na ha na-esite n'aka ebe a pụrụ ịdabere na ya! Apex Legends Fans na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ, ebe ọ bụ na e mesịrị ọkachamara na-eweta Apex Legends Hacks na aghụghọ.
Ihe kpatara anyi Apex Legends Hacks
Ga - achọ iji mbanye anataghị ikike, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ihe ị na - agaghị ahụ ebe ọ bụla ọzọ? Gịnị na-eme ka Apex Legends mbanye anataghị ikike dị iche iche bụ na nke na-arahụ n'ime mmepe usoro, nke bụ ihe ọzọ mbanye anataghị ikike mmepe leghaara. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ahụmịhe kachasị mma enwere, ọ nweghị ndị na-eweta mma karịa Gamepron.
Ihe kpatara anyi Apex Legends Aimbot
Chọghị ịhapụ mgbọ mgbe ị na-egwu Apex Legends, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-emeghe gị maka mmegide nke ndị na-emegide gị. Jiri anyi Apex Legends Aimbot ma gbaa mbọ hu na ihe nile ị n’eme na-ahapu gbọmgbọm ahụ n’uche igbu egbu! Ọbụna onye ọkpụkpọ nwere ọgụgụ isi nwere ike gbatuo ya na Apex Legends Aimbot n'ọrụ.
Ihe kpatara anyi Apex Legends ESP
Nri Apex Legends ESP ga - enye gị nnukwu uru, dịka ịhụ site na ebe siri ike na nke adịghị mma ga - emepe ohere karịa. Can nwere ike ịchọpụta ebe ndị na-ama ụlọikwuu na-eme ka ndị mmadụ hie ụra ma jikwaa ha n'ụzọ kwekọrọ na ya, ma ọ bụ ịnwere ike iji ọrụ ESP chọpụta ihe kachasị mma tupu ịbanye ụlọ. Kedu ihe ị ga - eji oge gị mee mgbe ị ga - ewepụ abụba na Apex Legends ESP na Wall Hack?
Kedu ihe kpatara akụkọ Apex na Wallhack
Ejikọtara ya na ESP, anyị Apex Legends Wall Hack ga-enye gị ohere ịkpọ ebe ndị iro dị mfe. Kwesighi ịhụ ha, ebe ị nwere ike ilele anya site na mgbidi siri ike ma sie ike ịchọpụta ebe onye iro ahụ nọ - mgbe ahụ ị nwere ike igbu ha ma ọ bụ mee ka ndị otu gị mara ihe egwu ahụ.
Ihe kpatara anyi Apex Legends Norecoil
Iweghachite na-enye ụfọdụ ndị nsogbu, ọ bụ ezie na anyị niile kwesịrị ịnwale ma tufuo ya oge ọ bụla anyị nwere ike. Nke a bụ ihe kpatara ọrụ NoRecoil ji bụrụ ihe a ma ama maka ndị ọrụ anyị niile, ebe ọ bụ na ịnwe "ziri ezi" na-emetụta gị ziri ezi na-ewe iwe. Bibie ya site na Apex Legends cheat!
Etu ibudata ihe kacha mma Apex Legends hacks?
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ibudata ihe egwu egwu Apex kacha mma dị na ntanetị, WinThat War bụ ebe kachasị mma ịnọ. Anyị bụ naanị ọrụ ma ị nweghị ike ịchọta njirimara ndị a (ebe a na-enye gị ogo a) ebe ọ bụla ọzọ! Soro klọb naanị site na ịzụta igodo ngwaahịa taa.
Why are your Apex Legends hacks dị oke ọnụ karịa ndị ọzọ
Anyị ga-akwụ ụgwọ ntakịrị ma ọ bụrụ na ị jiri ọnụahịa nke Apex Legends Hack ndị ọzọ tụnyere, tumadi n'ihi na anyị bụ naanị ọrụ na naanị nwere ọnụ ọgụgụ pere mpe nke inye. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ na ndụ, naanị iche ga - achọ ọnụahịa dị elu - ozi ọma ahụ bụ na anyị ka nwere ọnụ.
Anyị na-edebe ihe dị iche iche site na ịnye igodo ngwaahịa ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, kwa izu, na kwa ọnwa. N'agbanyeghị ole ị na-eche na ị ga-aghọ aghụghọ ule, anyị ga-enwe zuru okè ngwaahịa isi nhọrọ maka gị.
Awesome Akara Hack atụmatụ